အ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
အကြင်နာစစ်ရင်။ ရေး - မင်းချစ်သူ၊ ဆို - ဆုန်သင်းပါရ်။
အကြင်နာ နတ်ဘုရားမ။ ရေး - ကြည်ဝင်း။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
အကြင်နာလေးငါ့ကိုပေးပါ။ ရေး/ဆို - Galal'(အာတီချုပ်)။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
အချစ်ကိုဦးစားပေးခဲ့သူ။ ရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်။ ဆို - စိုင်းထီးဆိုင်။ စီးရီး - နွေရာသီ။
အချစ်စကြ၀ဠာ။ ရေး - ကိုလတ်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
အချစ်စစ်တစ်ခု။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
အချစ်စိတ်။ ရေး - နိုင်းနိုင်။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
အချစ်ဆိုတာ။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ဆောင်းဦးလှိုင်၊ စည်သူလွင်။ စီးရီး - ရိုမန်တစ်ရော့ခ်။
အချစ်ဆုံးကတော့ မင်းပဲ။ ရေး - မောင်သစ်မင်း။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
အချစ်ဖော်ကောင်။ ရေး - သွအောင်။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
အချစ်ရေပြန်ခဲ့တော့။ ရေး - Rခိုင်၊ ဆို - ခင်ဘုဏ်း၊ ရှင်ဖုန်း။
အချစ်နဲ့အတ္တ။ ရေး/ဆို - Japan ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၂)။
အချစ်ဦးပုံပြင်။ ရေး/ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
အချစ်အက္ခရာ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
အချိန်မီသာ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိခဲ့ရင်။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
အချိန်တိုင်းမင်းအတွက်။ ရေး/ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။ ရေး/ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
အဆင်မပြေသောချာတိတ်များ။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
အပျိုကြီး။ ရေး - သြနေသိမ်။ ဆို - PLP ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၂)။
အပြုံးတုရဲ့ အမုန်း။ ရေး - ဖိုးခွား။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
အပြောင်းအလဲ။ ရေး - Jate ။ ဆို - ရန်လေး၊ Ice-cream ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၃)။
အပြစ်ရှိသူ။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - အိပ်ရာဝင်သီချင်းများ။
အပယ်ခံ။ ရေး - ၀င်းမင်းထွေး။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
အဖြူရောင်လေးပါ။ ရေး - လင်းလင်း။ ဆို - ချစ်သုဝေ။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
အဖြူသက်သက်။ ရေး - V နိုထွန်း။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
အမေ။ ရေး - ရာပြည့်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
အမေ့ရုပ်ရည်။ ရေး - အုန်းမောင်။
အမောပြေ။ ရေး - ကိုမျိုး (PTL)။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
အမြဲတမ်း။ ရေး/ဆို - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ စီးရီး - မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့။
အမှောင်ထဲက သူစိမ်းများအကြောင်း။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
အမုန်းမျက်လုံး။ ရေး - ၀င်းမင်းထွေး။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
အမုန်းတွေ ရုပ်သိမ်းပေး။ ရေး/ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
အမှတ်မရှိ။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
အမှတ်တမဲ့။ ရေး - ဖိုးကာ။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
အတွေးပန်းချီ။ ရေး - နိုင်မင်း။ ဆို - ခင်မောင်တိုး။ စီးရီး - ကြိုးကြာသံ။
အတောင်ပံတွေ။ ရေး/ဆို - မျိုးကျော့မြိုင်။ စီးရီး - မြတ်နိုးခွင့် (၂)။
အတိတ်ရင်ခွင်။ ရေး - လင်းလင်း၊ ဆို - ဟန်ထွန်း။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
အဓိပတိလမ်းကခြေရာများ။ ရေး - ၀င်းမင်းထွေး။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
အနားမှာရှိရင်။ ရေး - လေးဖြူ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
အနယ်ထိုင်ချိန်မှာ မင်းရောက်လာ။ ရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်။ ဆို - စိုင်းထီးဆိုင်။ စီးရီး - နွေရာသီ။
အရင်လိုချစ်တုန်းပဲ။ ဆို - အာဇာနည်။ စီးရီး - နတ်သမီးပုံပြင်။
အရင်အတိုင်း။ ရေး - D ဦး။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
အလိုအပ်ဆုံး။ ရေး - ရဲရဲ။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး - ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူ။
အလင်းနှစ်များ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
အလွမ်းဆု။ ရေး - ကိုလတ်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
အလွမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၀၀။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
အလွမ်းရဲ့ စီးကြောင်း။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ကမ္ဘာသစ်တေး။
အလွမ်းရဲ့ သီချင်းတွေယူ။ ရေး - ငယ်ဆူးသစ်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
အလွမ်းရောင်။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
အ၀ါရောင်ကိုက်ခဲမှု။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
အဝေးကြီး။ ရေး/ဆို - မျိုးကျော့မြိုင်။
အသိရဲ့အတိတ်။ ရေး - ကျော်ထက်။ ဆို - Foppy ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၃)။
အသိအမှတ်ပြုပါ။ ရေး - ဖိုးကာ။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
အားယားနေလို့ပါ။ ရေး - အရိုး။ ဆို - အဲလက်စ်။ စီးရီး - စိတ်ကူးသက်သက်များ။
အားလုံးအတွက်ပန့်ခ်။ ရေး - ဝေဖုန်း။ ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
အိုးဝေေ၀။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
အံချော်ခြင်း။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
အိပ်မက်ကလေး။ ရေး - မျိုးမျိုး၊ အဲလက်စ်။ ဆို - အဲလက်စ်။ စီးရီး - စိတ်ကူးသက်သက်များ။
အိပ်မက်ကောင်းစဉ် မိုးအလင်းစေချင်။ ရေး - နိုင်မြန်မာ။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
အိပ်မက်ဆောင်းည။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
အိပ်မက်တစ်ခုပြဇာတ်တစ်ပုဒ်။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
အိပ်မက်ထဲကအိပ်မက်။ ရေး - မောင်သစ်မင်း။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
အိပ်မက်ထဲက အိပ်မက်များ။ ရေး/ဆို - အဲလက်စ်။
အိမ်။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ဟန်ထွန်း၊ တင်ဇာမော်။ စီးရီး - ရှိနေမယ်။
အိမ်ပြန်ချိန်။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - ဟန်ထွန်း၊ မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ သအို။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
အောင်ဗလအလွမ်းပြေ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
အောင်နိမိတ်။ ရေး - နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်။ ဆို - မကြည်အောင်။
အင်္ဂုလိမာလ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
ဤလောကီ။ ဆို - ခင်ခင်ရီ။
ဦးနုစကားပုံ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။